ဒလတံတား စီမံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် မြေနေရာမှ မပြောင်းရွှေ့သေးသည့် ကျူးကျော်အိမ်များကို ?? - Yangon Media Group
ဒလတံတားစီ မံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် နေရာ မှမပြောင်းရွှေ့သေးသည့် ကျူးကျော် များအား အစိုးရမှတရားဥပဒေနှင့် အညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ တံတားစီမံကိန်းနှင့် မလွတ် ကင်းသည့်နေရာများမှာ ဒလမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမကြီးပေါ်မှ ဂရမ်ရှိမြေနေရာ အဆောက်အအုံ များ၊ သာသနိကအဆေက်အအုံများ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် မြန်မာ့ဆိပ် ကမ်းအာဏာပိုင်မြေနေရာပေါ်ရှိ ကျူးကျော်အိမ်များဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ယခုအခါအဆိုပါ မြေနေရာ များမှကျူးကျော်အိမ်များကိုသာ ဖယ် ရှားပေးရန် ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဒလမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးယဉ် ထွေးကဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။ “တံတားနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ နေ ရာတွေကိုလျော်ကြေး၊ ကရုဏာကြေး ပေးထားပြီးဖြစ်သလို ဆိပ်ကမ်းအာ ဏာပိုင်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျူးကျော် အဆောက်အအုံတွေ ကလွဲလို့ ကျန် တာတွေအားလုံး ဖယ်ရှားပေးကြပြီး ပါပြီ။ သူတို့တွေမဖယ်ရှားရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ အစီအ စဉ်ရှိပါတယ်”ဟု ဦးယဉ်ထွေးက ဒီ မိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၃၁ ရက် ကပြောသည်။ ဒလတံတားစီမံကိန်းနှင့်မလွတ် ကင်းသည့် ကျူးကျော်အိမ်များကို သက်ဆိုင်ရာမှ ကရုဏာကြေးပေး ပြီးဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးဖယ် ရှားရမည့် ရက်ကျော်လွန်သွားသည့် တိုင်ပြောင်းရွှေ့ရန် နေရာအခက် အခဲကြောင့် မဖျက်သိမ်းသေးကြောင်း သိရသည်။
ဒလဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မြေ ပေါ်မှ ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် အ ဆောက်အအုံ ၁၀ဝ ကျော်ကို အိမ် အမျိုးအစားအလိုက် အစိုးရအဖွဲ့ မှမတ်လ ၂၃ ရက်နေ့၌ ကရုဏာ ကြေးပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း က မာကဆစ်ရပ်ကွက်မှ ရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်က ပြော သည်။ “ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကနေ လှည်းကူးဘဏ်ကနေတစ်ဆင့် ဒီလသာဘဏ်(၅)ကို လွှဲပေးတယ်။ ငွေထုတ်တဲ့ပြည်သူတွေက မှတ်ပုံ တင်နဲ့ထုတ်ယူပြီး သူတို့အနေနဲ့ အဆိုပါနေရာကနေ မတ်လ ၃၀ ရက် နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့ ကိုခံဝန်ရယ်၊ လက်ခံရရှိကြောင်း ရယ်ထိုးပြီးထုတ်ယူခဲ့တယ်”ဟု ၄င်း ကပြောသည်။ ကရုဏာကြေးရရှိသူများအား လုံးဘဏ်မှငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်သော် လည်းမတ် ၃၁ ရက်ထိတိုင် မူလနေရာတွင်ပင်နေထိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ “အကုန်လုံးက ဗြုန်းခနဲကြီးဆို တော့အန်တီတို့လည်း ဘာမှမတတ် နိုင်ဘူးလေ။ အခုလည်းပြောင်းဖို့အ တွက်နေရာရှာနေတာ မတွေ့သေးပါ ဘူး။ သူတို့ပေးတဲ့သုံးသိန်းကလည်း အိမ်စပေါ်တင်တာနဲ့ကုန်မှာ။ ပြောင်း ဖို့ရွှေ့ဖို့အိမ်ရှာမတွေ့မချင်းကတော့ ဖယ်ပေးဖို့မဖြစ်ဘူး။ ဒီမှာပဲတဲထိုး ပြီးနေရုံပဲ”ဟု ကျူးကျော်နေထိုင် သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်သူ အများ စုမှာလက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီး သမ္ဗန်လိုက်ခြင်း၊ ကုန်ထမ်းခြင်း စ သည့်လုပ်ငန်းများနှင့် သက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနေသူများဖြစ်သည်။၄င်းတို့သည် နေ့စားအလုပ် သမားများဖြစ်သဖြင့် အခကြေးငွေ ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိကြောင်း ကျူးကျော်နေထိုင်သူအ မျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ “ကုန်ထမ်းရင် တစ်နေ့သုံး ထောင်၊ လေးထောင်ရတယ်။ ကုန်မ ထမ်းရရင် ကြုံရာလုပ်ရတယ်။ ဒီဝင် ငွေနဲ့မိသားစုအကုန်လုံးအတွက် စား ဖို့အနိုင်နိုင်ပဲရတယ်။ အခုအိမ်လ စာထပ်ရှာရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအ ဆင်ပြေနိုင်မှာလဲ”ဟု ၄င်းကပြော သည်။ အစိုးရအဖွဲ့မှကရုဏာကြေး ပေးမှုနှုန်းထားကို တိုက်ခံအိမ်၊ ပျဉ် ထောင်အိမ်နှင့်ဓနိမိုးထရံကာစ သည့် အမျိုးအစားအပေါ်မူတည် ကာ ကာလပေါက်ဈေးနှင့် အညီပေး အပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒလမြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်း ရင်က ပြောသည်။
“အများဆုံး ၁၀ သိန်းကနေ အနည်းဆုံးက ငါးသောင်းအထိရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့အဆောက်အ အုံရဲ့တန်ဖိုးအလိုက် ကာလပေါက် ဈေးနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ် တယ်။ တချို့ကတိုက်ခံ၊ တချို့က လည်းပျဉ်ထောင်၊ အဲ့ဒါကိုမှထရံနဲ့ ဝါးနဲ့ညှပ်ပြီး ဆောက်တာတစ်ဈေး ဒီလိုပုံစံနဲ့ ကွင်းဆင်းသတ်မှတ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တစ်ဆင့် ကရုဏာကြေးပေးတာဖြစ် တယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။ တည်ဆောက်မည့် ရန်ကုန်-ဒလတံတား၏ပျမ်းမျှ စုစုပေါင်း အရှည်မှာ ၆၁၄၄ ပေရှိပြီး လေး လမ်းသွား သံမဏိကြိုးဆိုင်းတံတား (Cable Steel Bridge) အမျိုး အစားဖြစ်သည်။
မြောင်းမြမြို့ မြစ်ကူးကြိုးတံတား မြစ်အတွင်းပြတ်ကျ
ရိုက်တာ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် ချမှတ်ခံရမှု အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွှတ်?
WATER BUS ဆိုက်ကပ်ခြင်းကြောင့် လှိုင်ဘူတာရုံဆိပ်သို့ ကုန်သင်္ဘောအဝင် ရပ်ဆိုင်း၊ ကုန်တင်/ကုန်ချလုပ